Hormuudkii Hogaaminta Degmooyinka Loo Soo Xulay Oo Bakhtiyaa-nasiibkii Qaatay - Cakaara News
Hormuudkii Hogaaminta Degmooyinka Loo Soo Xulay Oo Bakhtiyaa-nasiibkii Qaatay
Jigjiga(Cakaaranews) Khamiis, 29ka September 2016. Waxaa saaka hoolka shirarka muhiimka ah ee xarunta madaxtooyada bakhtiyaa-nasiib kuqaatay hormuudkii hogaaminta degmooyinka loo soo xulay oo kakooban 34 xubnood . Kuwaas oo noqonaya gudoomiyeyaasha degmooyinka cusub iyo qaar kamid ah degmooyinkii hore.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaamintan ugu duceeyay in xilka ilaahay ku asturo ayaa kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan musuqa, eexda iyo nin-jeclaysiga islamarkaana ay si cadaalad ah oo sharciga ku salaysan ugu adeegaan bulshada iyagoo ilaalinaya hantida dawlada iyo ta shacabka gaar ahaan gaadiidka iyo miisaaniyada degmada .Wuxuuna ku booriyay inay noqdaan kuwo unugul islamarkaana kadamqada baahida shacabka.
Bakhtiyaa-nasiibkii kadib ayaa waxaa madasha kahadlay qaar kamid ah xubnihii hormuudka hogaaminta degmooyinka loo soo xulay ee bakhtiyaa nasiibka qaatay iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin nidaamka cadaaliga ah ee loo sameeyay islamarkaana bogaadiyay qaab-socodka XDSHSI iyo xukuumada DDSI ee uu hormuudka kayahay madaxwayne CMC iyagoo kutilmaamay nidaamka loo soo xulay, tababaradii ay qaateen iyo bakhtiyaa nasiibka meelaynta shaqooyinkooda inay tahay mid taariikhi ah oo kudhisan cadaalad islamarkaana ay kamadhan tahay eex iyo nin-jeclaysi. Hogaamintan cusub ayaa intaa ku dartay inay shacabka ugu shaqayn doonaan si daacadnimo, wadaniyad iyo xilkasnimo ku dheehan tahay iyagoo balan qaaday inay noqonayaan kabihii shacabka. Waxayna madaxwaynaha kacodsadeen inuu u duceeyo si xilka allah ugu asturo.
Kulankan ayaana kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan iyagoo hogaamintu niska danbe ee maanta qaadan doona magacaabistoodii.